30 October 2020 ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီမှ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးမြင့်လှိုင် / ထက်နိုင်ဇော် / ဧရာဝတီ
နေပြည်တော်တွင် ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ ဖြိုးရေးပါတီက အမျိုးသား လွှတ်တော်နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အားလုံးတွင် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မည် ဖြစ်ပြီး ပါတီ၏ ဥက္ကဌ ဦးသန်းဌေးကိုယ်တိုင် နေပြည်တော်က ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ရန် မဲဆွယ်နေပြီ ဖြစ်သည်။
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီသည် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် နေပြည်တော်၌ နေရာအားလုံး အနိုင်ရခဲ့သော်လည်း ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ
တွင် တနေရာသာ အနိုင်ရရှိခဲ့ရာ ယခုတကြိမ်တွင် အနည်းဆုံး တဝက်အနိုင်ရလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်လျက်ရှိသည်။
၎င်းတို့ပါတီ၏ နေပြည်တော်တွင် ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေး ကြိုးစားမှု အခြေအနေ၊ ကိုဗစ်ကာလ မဲဆွယ် စည်းရုံးမှုများ အကြောင်း၊ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ဘာကြောင့် ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရသလဲ ဆိုသည့် အချက်များ၊ ပြည်သူသို့ ကတိပေး လိုသည့် အချက်၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းများ နေပြည်တော်ကို ခြေကုတ်ယူရသည့် အကြောင်းများက မေးစရာများ မေးခွန်းများ ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီမှ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မည့် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဟောင်းလည်း ဖြစ်၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးဟောင်းလည်း ဖြစ်သူ ဦးမြင့်လှိုင်ကို ဧရာဝတီ သတင်းဌာန နေပြည်တော် သတင်းထောက် ထက်နိုင်ဇော်က သွားရောက် တွေ့ ဆုံ မေးမြန်းထားပါသည်။
မေး ။ ။ ပထမဆုံး သိချင်တာက ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲဆွယ်စည်းရုံးမှု ပြင်ဆင်ထားမှု အခြေအနေပါ။
ဖြေ ။ ။ မေးတဲ့မေးခွန်းအပေါ်မှာ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲကာလအတွက် ကျနော့်ပြင်ဆင်မှု အဓိကပြင်ဆင်တာကတော့ ကျနော်တို့ ပါတီကို ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ သစ္စာရှိရှိနဲ့ ပါတီရဲ့တာဝန်တွေကို အလေးအနက် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ပါတီဝင်တွေ အင်အားခိုင်မာအောင် ပါတီဝင်တွေရဲ့ သစ္စာရှိမှုကို တည်ကြည်လေးနက်အောင် ကျနော်က ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ပါတယ်။
နောက်ပြီးတော့မှ ပါတီဝင်တွေကနေပြီးတော့မှ ပြည်သူတွေအကြားမှာ ပြည်သူတွေရဲ့ ပကတိအမှန်ကိုသိရှိပြီးတော့မှ ပြည် သူ အခက်အခဲကို အမှန်တကယ် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမယ့်ပါတီဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ပြည်သူနဲ့ တသားတည်း ဖြစ်အောင် လှုပ်ရှားဖို့အတွက် ကျနော့်အတွေ့အကြုံအရပေါ့လေ။ သူတို့ကို စည်းရုံး ဟောပြောတဲ့နည်းလမ်းတွေကို လက်ထပ်ပြီးတော့ မှ လေ့ကျင်သင်ကြားပေးပါတယ်။ ကျနော်လည်း ပြောဆိုရေးသားထားတာတွေကိုလည်း သူတို့ကို ကိုယ်တိုင်ပဲ ပါတီရဲ့ အ ရေးကြီးတဲ့ စည်းရုံးရေးမှူးတွေကို ကိုယ်တိုင်ပဲဖတ်ကြားခိုင်းပြီးတော့ အထပ်ထပ်အဖန်ဖန်ဖတ်ကြားခိုင်းပြီးတော့ သူတို့ ခေါင်းထဲမှာ ဒါတွေကိုပြည်သူအကြားစိမ့်ဝင်စည်းရုံးတဲ့အခါမှာ ထိရောက်တဲ့စည်းရုံးမှုတွေဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက် လေ့ကျင့်ပေးတဲ့ အနေနဲ့ ပထမအဆင့် ဆောင်ရွက်ပါတယ်။
အဲဒီတော့ ပထမ ၁ ချက်အနေနဲ့ကတော့ ပြည်သူတွေကြုံတွေ့ခံစားနေရတဲ့ ဘဝလုံခြုံမှုပေါ့နော်။ Life Security နဲ့ ပြည် သူတွေရဲ့ လူမှု စီးပွားဘဝလုံခြုံမှု အခက်အခဲတွေကို ကျနော်တို့ အစိုးရရယ်လို့ ပြည်သူကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ နိုင်ငံတော် အစိုးရ အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ ဒီတာဝန် ၂ ရပ်ကို ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့တာဝန်ယူပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်လို့ ကျနော်က အရှေ့ကို မျှော်တွေးပြီးတော့မှ ကျနော်ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ ဘဝလုံခြုံမှု လူမှုစီးပွားဘဝလုံခြုံမှုကို နံပါတ် ၁ ဦးစားပေးအနေနဲ့ ကျနော် ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒုတိယအချက်ကတော့ အစိုးရတရပ်သည် ပြည်သူကရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်သည့်အစိုးရတရပ်သည် By the People of the People For the People ပြည်သူကမဲဆန္ဒတွေနဲ့ထောက်ခံပြီးရွေးချယ်လိုက်တဲ့အစိုးရသည် ပြည်သူ့ အစိုးရ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူကနေ ထောက်ခံလိုက်တဲ့ အစိုးရ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအစိုးရသည် For the People ပြည်သူကို ပေးထား တဲ့ ကတိကဝတ်တွေထဲမှာ ပြည်သူလူထုရဲ့ နေ့စဉ်လိုအပ်ဖြစ်တဲ့ စားရေး၊ ဝတ်ရေး၊ နေရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး ဒီလိုအပ်ချက်တွေကို သူတို့ရဲ့ တနေ့တာ တလတာ ရှာဖွေလုပ်ကိုင်ပြီးတော့မှ အလုပ်အကိုင်ကနေရတဲ့ဝင်ငွေနဲ့ လုပ်လောက်မျှတအောင် လုံလောက်မျှတတဲ့ဝင်ငွေရရှိဖို့ဆိုတာ ဒီလိုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေကို အစိုးရတပ်ရပ် တာဝန်ယူရမယ်၊ ရှာဖွေပေးရမယ်၊ ဖန်တီးပေးရမယ်။ ဒီလိုမဖန်တီးပေးနိုင်ဘူး။ တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိလို့ရှိရင် ပြည်သူက ရွေးတဲ့အစိုးရရယ်လို့ သတ်မှတ်နိုင်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို ကျနော်ရဲ့ ဒုတိယအချက်ကို ဖော်ပြထားပါတယ်။
တတိယအချက်ကတော့ ကျနော်တို့ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံမယ့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေဟာ ပါတီတွေဟာ ရွေးချယ်ခံ နိုင်ဖို့အတွက်ကို စည်းရုံးရေးကာလမှတော့ဖြင့်ရင် ကတိတွေအမျိုးမျိုးပေးကြပါတယ်။ ကတိတွေ အမျိုးမျိုးပေးကြပြီးတော့ လက်တွေ့အစိုးရရယ်လို့ အနိုင်ရရှိပြီးတဲ့အခါကျတော့ ဒီကတိတွေကိုမေ့ပျောက်ပြီးတော့မှ ပြည်သူကို လစ်လျူရှု့ သွားတာ တွေလည်း ကျနော်တို့တွေ့ရပါတယ်။
ကျနော်တို့အရွေးခံလို့ရှိရင် ကျနော်ကတိတည်အောင် ပြည်သူတွေကိုပေးတဲ့ကတိတွေကို တည်အောင် ကျနော် အစွမ်း ကုန်လုပ်ပါမယ်။ တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်တော့ အဂတိကို ကျနော်ရှောင်ရှားပါမယ် ဆိုပြီးတော့ ကျနော်တိတိကျကျ ဖော် ပြထားပါတယ်။ အဲဒီတော့ အစိုးရရယ်လို့ ဖြစ်လာတဲ့ အချိန်ကျရင် ကျနော်တို့က လူသားတွေဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့်မိုလို့ လောဘ ဒေါသ မောဟတွေ မကင်းနိုင်သော်လည်းပဲ အစိုးရရယ်လို့ ဖြစ်လာပြီးတော့မှ တိုင်းပြည်အတွက် တာဝန်ယူတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များ တိုင်းပြည်အတွက် တာဝန်ယူတဲ့ ပါတီများ တိုင်းပြည်အတွက် တာဝန်ယူကြမယ့် အကြီးအကဲများက အဂတိ တရားကိုတော့ တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ဖို့တော့ လိုတယ်။
မေး ။ ။ ကိုဗစ်ကာလမှာ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး လှုပ်ရှားရတာ ဘယ်လို အခက်အခဲတွေ ရှိလဲ။
ဖြေ ။ ။ ကျနော်ရဲ့ အောင်နိုင်ရေးထက်ကို ပြည်သူတွေမှာ ကျနော်စည်းရုံးတဲ့အခါမှာ တယောက်ယောက်များ ပါလာခဲ့ရင် ထိတွေ့ မှု ရှိသွားရင် အဲဒါကို စိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကို တတ်နိုင်သမျှ အစွမ်းကုန် Mask တွေ အရင်ဆုံး ဖြန့်ဝေပါတယ်။ ကျနော်တို့ကလည်း Mask တွေ လုံလုံလောက်လောက် ယူသွားပြီးတော့မှ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ၆ ပေပေါ့။
နောက်ပြီး လူဦးရေ ၅၀ ထက် မပိုရဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေကို ကျနော်ကို ဘယ်လောက်ပဲ ချစ်ခင်လို့ လာပြီး လူအုပ်ကြီး များပါစေ မြန်မြန်ချဲခိုင်းပါတယ်။ သတ်မှတ်တဲ့အတိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးပါ။ ကျနော်မှာ ပါလာရင်လည်း ခင်ဗျားတို့အတွက် အန္တရာယ်ကြီးတယ်။ ခင်ဗျားတို့မှာ ပါလာရင်လည်း ဒီမှာရှိတဲ့ လူထုအားလုံးအတွက် အန္တရာယ်ရှိပါတယ် ဆိုပြီး ရှင်းပြပြီးမှ ပထမဦးစွာ ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ အဲဒီလိုကိစ္စတွေကြောင့် စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်ရတဲ့ အချက်တချက် ဖြစ်ပါတယ်။
လူ ၅၀ စီ တစု၊ တစုနဲ့ လိုက်ပြီး စည်းရုံးမဲဆွယ်ရတဲ့ အခါကျတော့ နည်းနည်းတော့ ပင်ပန်းပါတယ်။ အသံဝင်တာတို့ အသံ ပြာသွားတာတို့ အသံဝင်တာတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ကျနော် ကျေနပ်မိပါတယ်။ တရွာထဲမှာပဲ ၄၊ ၅ နေရာ တွေ့ ရပါတယ်။ ပိုပြီးတော့ မျက်လုံးချင်း ပိုတွေ့ ရတယ်။ ဒီအခွင့်အရေးလေးကလည်း ကောင်းတဲ့ အခွင့်အရေးလေးလို့ မြင်ပါ တယ်။ အားမရလို့ရှိရင် ကျနော့်ရုံးမှာပဲ ထပ်တွေ့ ကြတာမျိုး လုပ်ပါတယ်။
ကျေးရွာတွေမှာ ဒေါင်ဒေါင်မြည်ပြီးတော့မှ ကျနော်တို့ရဲ့ ပါတီကို ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ပါတီတွေကို ဘယ်သူ့ကို ပေးရမလဲဆိုတာ ဝေခွဲလို့ မရတဲ့သူတွေ ကျနော်နဲ့ သီးခြားလာတွေ့တာ ရှိပါတယ်။ ဒီမှာလည်း လေးလေးစားစားနဲ့ ပါတီက လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အချက်တွေနဲ့ ဒီနေ့ နိုင်ငံရဲ့ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ လာမယ့် ၅ နှစ် ကာလမှာ အရွေးမမှားအောင်၊ အတွေး မမှား အောင် ဆုံးဖြတ်ချက်မမှားဖို့ ပြောပါတယ်။
မေး ။ ။ အန်ကယ် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက မဲအရေအတွက် ဘယ်လောက် ရခဲ့လဲ။ ဘာကြောင့် ရှုံးခဲ့တယ်လို့ ထင်လဲ။
ဖြေ ။ ။ ၂၀၁၅ တုန်းက ကျနော်နယ်မြေ အပါအဝင် တနိုင်ငံလုံးမှာ ရှုံးခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းကတော့ ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီ ဆိုပြီးတော့မှ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ်ပါတီရဲ့ ကြွေးကြော်သံ၊ စည်းရုံးသံက တော်တော်လေး ထိရောက်တယ်ဗျ။ အဲဒီအချိန်မှာလည်း ရိုးရိုးသားသားနဲ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင် ကျနော်တို့ကလည်း ကိုယ့်ရဲ့ပါတီကို နိုင်စေချင်တဲ့ စိတ်စေတနာတော့ ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် တိုင်းပြည်ကောင်းဖို့အတွက်ဆိုရင် ဘယ်သူပဲ လာလုပ်လုပ် ကျနော့်စိတ်ထဲမှာ အားရတယ်။
အားရတော့ ကျနော်တို့ အပြတ်အသတ် ရှုံးသွားတဲ့အခါမှာ တနိုင်ငံလုံး ရှုံးသွားတဲ့အခါမှာ တိုင်းပြည်ကို တော်တော် ကောင်းအောင် လုပ်နိုင်တော့မှာပဲလို့ မျှော်လင့်မိတယ်။ ဒီလောက်တောင် နိုင်သွားတဲ့ ပါတီကြီးတခုဟာ တိုင်းပြည်ကို ကောင်းအောင် လုပ်နိုင်တော့မှာပဲ ဆိုပြီးတော့ ကျနော်တို့ မိသားစုအတွင်းမှာ အားရတဲ့စကားတွေ ပြောမိတယ်။
တို့လည်း အစွမ်းကုန် ကြိုးစားတာပဲ။ ဒါပေမယ့် ပြည်သူတွေရဲ့ နိမ့်ကျတဲ့ဟာကို မဖြည့်ဆည်းနိုင်ခဲ့ဘူး။ ဒီလို ခံစားမိတဲ့အခါ ကိုယ့်ထက်ပိုလုပ်နိုင်မယ့် ပါတီတခု ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အပေါ် ကျနော်တို့ ကြည်နူးမိတယ်ဗျာ။ ပြောရမယ်ဆိုရင် ပြောင်းလဲ ချိန်တန်လို့ ပြောင်းသွားတဲ့အတွက် ရှုံးချိန်တန်လို့ ရှုံးရတယ်လို့ပဲ အဲဒီတုန်းက ခံစားမိတာပေါ့ဗျာ။
ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီလို့ ပြောတဲ့ ဥစ္စာက တကယ့်ကို ထိမိတဲ့ဟာပဲ။ ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာကို လူတိုင်းကကြိုက်တယ်။ ဒီမိုက
ရေစီဆိုတာ People Power ပဲကိုး။ ပြည်သူက ရွေးချယ်တင်မြောက်တဲ့ အစိုးရက ပြည်သူ့အတွက် ပြန်လုပ်တယ်ဆိုတော့ ကျနော်တို့က ဒါကြိုဆိုရမယ့် ကိစ္စပဲဗျာ။ ကျနော်တို့လည်း တသက်တာလုံး အာဏာရမယ့် နေရာမှာ နေနိုင်မှာမှ မဟုတ်ဘဲ။
ဒါကြောင့်မိုလို့ ၂၀၁၅ မှာ ရှုံးသွားတဲ့ အကြောင်းတရားကို ပြောမယ်ဆိုရင် ပြည်သူရဲ့ ဆန္ဒပြည့်စုံသွားတယ်လို့ ကျနော်တို့က အဲဒီလိုလေး မြင်ပါတယ်။ ရှုံးရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို ပြောရရင် ကျေးရွာ ၂၈ ရွာနဲ့ ရပ်ကွက် ၂ ရပ်ကွက်မှာ . . . ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၁ မှာ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်မှာ ဟိုတယ်ဇုန် ပေါ်လာတယ်။
ဟိုတယ် ၃၀ ကျော်၊ ၄၀ ပေါ့။ အဲဒီတုန်းကလည်း ဟိုတယ် ၄၀ နီးပါးလောက် ရှိတယ်။ အဲဒီ ၄၀ က ၂၀၁၀နဲ့ ၂၀၁၂ မှာ ကျ နော်တို့ရွာတွေမှာ မဲလာမထည့်ဘူး။ ၂၀၁၅ မှာကျတော့ ကျနော်တို့ရွာတွေမှာ ကျနော်တို့ ကော်မရှင်က အဲဒါတွေကို လိုက် လျောပေးလိုက်တဲ့အခါ ရွာတွေမှာ မဲလာပေးပြီးတော့ မဲရုံတွေမှာ အစောကြီး မိုးမလင်းခင်ကတည်းက ပြည့်ကျပ်ပြီး
တော့ ပိတ်ဆို့ပြီးတော့ နေရာယူထားတဲ့အခါ ရွာသားတွေက မနက်မိုးလင်းမှာ အိပ်ရာထပြီး မဲလာထည့်တဲ့အခါမှာ ကျနော်တို့ ရွာသားတွေ မဲမပေးလိုက်နိုင်ဘူး။
မဲပေးခွင့် ဘယ်လောက် ဆုံးရှုံးသလဲဆိုရင် ၅၂၀၀ တိတိ မဲစာရင်းပါပြီးတော့ ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားတွေ စိတ်မကောင်း ကျဘူးပေါ့။ မဲမပေးလိုက်နိုင်ဘူး။ မဲရုံမှာ တနေ့တာလုံး လာပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်။ ၅၀၀၈ မဲက ဧည့်စာရင်း တိုင် ပြီးတော့မှ ကပ်ပြီးတော့ မဲစာရင်းမှာ ပါလာပြီးတော့မှ ပိတ်ဆို့ပြီး လာပေးသွားတာသည် ကျနော်ရဲ့ ဆုံးရှုံးရတဲ့ အချက်ပဲ။
ဒုတိယအချက်ကတော့ ၁၀၇၈ မဲ၊ ပယ်မဲ ဖြစ်တယ်။ ၂၀၁၀ မှာ ကျနော်တို့က ရိုးရိုးလေးပဲ။ အမှန်ခြစ်နဲ့ သွားတဲ့အခါမှာ ပယ်မဲတွေ မရှိသလောက်ပါပဲ။ အင်မတန်မှာ ရိုးရှင်တဲ့နည်း၊ လွယ်ကူတဲ့နည်းနဲ့ သွားခဲ့တယ်။ အမှားနဲ့ အမှန်ဆိုတာ လူတိုင်းက လုပ်တတ်တယ်လေ။ ၂၀၁၅ မှာ တံဆိပ်တုန်း ထုရတဲ့အခါကျတော့ တံဆိပ်တုန်းမင်တွေ အပြင်ရောက်တာတို့ စွန်းတာတို့ အကြောင်းပြုပြီးတော့ ပယ်မဲတွေ အများကြီး ဖြစ်တယ်။
၁၀၇၈ မဲ ပယ်မဲတွေပါတဲ့ အပေါ်မှာ ကျနော်ကို ထောက်ခံတဲ့သူ အများစုပါသွားတဲ့အတွက် အဲဒီက ဒုတိယ အချက် ဖြစ် ပါတယ်။ ကျနော်ရဲ့ ပါတီဝင် အင်အားက ၆၀၀၀ နီးပါးလောက် ရှိပါတယ်။ ကျနော် ခိုင်လုံမဲ ၇၀၀၀ ကျော် ရပါတယ်။ ပါတီဝင်တွေနဲ့ကျနော် တသားတည်း ရှိခဲ့တယ်။ ပါတီကို ချစ်တဲ့သူတွေကလည်း မဲပေးခဲ့တယ် ဆိုတာကတော့ တွက်လို့ ရပါတယ်။
ရှုံးရတဲ့ အကြောင်းကတော့ ပြည်သူလူထုက ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီဆိုပြီး ပြည်သူလူထုက သူတို့ရဲ့ အိမ်မက်တွေ ပိုကောင်းအောင် ပိုကောင်းတဲ့ အစိုးရတခုကို သူတို့ Choice ပါပဲ။ သူတို့ရဲ့ Choice ကြောင့် ရှုံးခဲ့တယ်လို့ ရိုးသားစွာ ဖြေလိုပါတယ်။
ဦးမြင့်လှိုင်နှင့် ပါတီကို ထောက်ခံသူများ တွေ့ ဆုံနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ – ကျော်မျိုး/ဧရာဝတီ)
မေး ။ ။ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်က မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူတွေက အန်ကယ် ဦးမြင့်လှိုင်ကို ဘာကြောင့် မဲပေးသင့်တာလဲ။
ဖြေ ။ ။ အဲလိုဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပရိုမိုးရှင်း လုပ်ရရင် ကျနော်က စေတနာ ထက်သန်တယ်ဗျ။ ပြည်သူတွေ အပေါ်မှာ စာနာတဲ့စိတ် အမြဲတန်း စဉ်းစားတယ်။ ကျနော်ကို ငယ်ကတည်းက ကျနော်ရဲ့ အဖေ၊ အမေပေါ့နော်။ လက်ဦးဆရာပေါ့။
ကျနော်ရဲ့ မိဘ ၂ ပါးကလည်းပဲ ဘယ်အရာပဲ လုပ်လုပ် ကိုယ်ချင်းစားစိတ် ကြည့်ပါလို့ ပြောတယ်။
ကျနော် တပ်မတော်သား အဖြစ် နှစ်ပေါင်း ၄၀ လောက် တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ အချိန်မှာလည်း လက်အောက်ငယ်သား
တွေကို စာနာတဲ့စိတ်မှာ စံပြထဲမှာ ပါတယ်လို့ ကျနော် လေးလေးနက်နက် ယုံကြည်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အစော ဆုံး၊ အငယ်ဆုံး တပ်ရင်းမှူးဗျာ။ အငယ်ဆုံး တပ်မမှူး၊ အငယ်ဆုံး တိုင်းမှူးဗျာ။ အငယ်ဆုံး ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဖြစ်ခဲ့
တယ်။ လက်အောက်ငယ်သားတွေကို ချစ်ခင်လေးစားတဲ့နေရာမှာ . . . လက်အောက်ငယ်သားတွေရဲ့ ချစ်ခင်မှုကို ရာခိုင် နှုန်း အပြည့်ရတဲ့ တပ်မှူးကောင်းတယောက်မိုလို့ ကျနော် ပြည်သူတွေကြားကို ဝင်တဲ့အခါမှာလည်း ပြည်သူတွေကို အင်မတန် တန်ဖိုးထားတဲ့ စိတ်နဲ့မိုလို့ ကိုယ်ချင်းစာတယ်။
ဒီလိုစိတ်ပေါ့နော်။ ပြည်သူ့ရဲ့ ဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းမယ်ဆိုတာ ကျနော်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲ။ ကျနော်ချက်ချင်း လုပ်နိုင်တာကို မဆိုင်းမတွပဲ အဖြေပေးတယ်။ ချက်ချင်းကို လုပ်ပေးတယ်။ နုတ်ကတိတင် မဟုတ်ဘူး။ စာကတိပါ ပေးတယ်။ ကျနော် ဦးမြင့်လှိုင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတာဝန်လည်း ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တာဝန်လည်း ထမ်းဆောင်ခဲ့ တယ်။ သမိုင်းမှာ အမဲစက်လည်း မရှိပါဘူး။ ကျနော်ကို ယုံကြည်ပါ။ နုတ်တရာ စာတလုံးနဲ့ ကတိပေးပါတယ်။
ကတိကို နုတ်နဲ့ မပြောဘူး။ စာနဲ့ ပေးထားတာ။ ကတိမတည်ရင် ကျနော်ကို ခြေထောက်နဲ့ လာပြီး နင်းပါလို့။ ကျနော် အဲလို အဖြေပေးထားတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျနော်ကို ထောက်ခံသင့်တယ်လို့ ပြည်သူတွေကိုလည်း ရိုးရိုးပဲ ပြောပါတယ်ဗျာ။
မေး ။ ။ မဲဆွယ် စည်းရုံးရေးအောင်နိုင်ရေး စီတန်း လှည့်လည်မှုတွေမှာပေါ့နော်။ ပြိုင်ဘက်ပါတီတွေနဲ့ ထိပ်တိုက် တွေ့ တာ နှစ်ဘက်ပါတီ ထောက်ခံသူတွေကြားမှာ မလိုလားအပ်တဲ့ ပြဿနာတွေ မဖြစ်ပွားအောင် ဘယ်လိုလုပ်လဲ။
ဖြေ ။ ။ ကျနော် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး သွားတဲ့အခါမှာ ပြိုင်ဘက်ပါတီတွေ တဘက်ပါတီတွေနဲ့ ထိပ်တိုက်မတွေ့အောင် ကျ နော်က တဘက်ပါတီတွေကို ထိခိုက်မယ့်စကားကို ပြည်သူလူထုနဲ့ကြားမှာ လုံး၀ ကျနော် ရှောင်ပါတယ်။ အမုန်းစကား လုံး၀ မပြောပါဘူး။ သူတို့ကို ချင့်ချိန်ဆုံးဖြတ်ပါလို့ ပြောပါတယ်။
အဲဒါနံပါတ် ၁ ပေါ့။ လိုက်နာတဲ့ အချက်ပေါ့။ နောက်ခုက ကိုဗစ်ရောဂါ ပြန့်ပွားနေတဲ့ အန္တရာယ်ကာလမှာ ဖြစ်တော့ ကျနော် အတွက် မဲနိုင်ရေး၊ ရှုံးရေးဟာ အဓိက လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ လောလောဆယ်ကတော့ ပြည်သူအားလုံးအတွက် ကျနော့် ပါတီ ကလည်းပဲ ကျန်းမာရေးသာလျင် နံပါတ် (၁) ကျန်းမာရေးသာလျင် နံပါတ် (၂) ပြည်သူတွေရဲ့ အသက် အန္တရာယ် မဖြစ်ရေး သာလျင် နံပါတ် (၁) ဆိုပြီးတော့ ကြွေးကြော်ပြီးတော့မှ စည်းရုံးရေးကို တတ်နိုင်သမျှ ကျနော်တို့ Crowded မဖြစ်အောင် ပေါ့။
ကျနော်တို့ရဲ့ ပါတီက လမ်းညွှန်ချက် ပေးထားတာနဲ့အညီ ကျနော်တို့ကလည်း ပြည်သူကြားမှာ ကျန်းမာရေးကိစ္စကိုပဲ ဦးစား ပေးပြီးတော့မှ ကျန်မားရေး ဝန်ကြီးဌာနက ချမှတ်ထားတဲ့ WHO ကို ချမှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းတွေကို လိုက်နာဖို့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ ဘယ်လောက်ပဲ ချမ်းသာချမ်းသာ ဘယ်လောက်ပဲရာထူးစည်းစိမ်တွေရှိစေကာမူ ကျန်းမာရေးမကောင်းဘူးဆိုရင် ဒီတိုင်းပြည်အတွက် အရမ်းနစ်နာတယ်။ ခင်ဗျားတို့ အသက်တချောင်းနဲ့ ကျနော်တို့ အသက်တချောင်းတို့ ထပ်တူထပ်မျှပါပဲ။
ခင်ဗျားတို့ မကျန်းမာတာလည်း မဖြစ်စေချင်ဘူး။ ကျနော်တို့လည်း မကျန်းမာတာ မဖြစ်စေချင်ဘူး ဆိုတာနဲ့ ကျနော့်ရဲ့ Principle နဲ့ စည်းရုံးတယ်။ မေတ္တာနဲ့စည်းရုံးတဲ့ လုပ်ငန်း လုပ်သလို တဘက်ပါတီတွေနဲ့လည်း ထိပ်တိုက်တွေ့မယ့် စကားကို တအား ရှောင်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေ ၅ နှစ်တာ ပြည်ခိုင်ဖြိုးနဲ့ကြုံခဲ့ပြီးပြီ။
ဒီ ၅ နှစ်တာ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံပေါ်မှာ ပြည်သူတွေပဲ ဆုံးဖြတ်ကြပါဆိုပြီးတော့မှ နှိုင်းနှိုင်းချင့်ချင့် ဝေဖန်ပါ။ သုံး သပ်ကြပါ။ အနာဂတ်အတွက် ပြည်သူကထိုက်တန်တဲ့အစိုးရကိုရွေးချယ်ပါ ပြည်သူတွေနဲ့ တန်တဲ့အစိုးရနဲ့ ပြည်သူတွေနဲ့ တွေ့ ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၅ နှစ် အတွေ့အကြုံနဲ့ ဟို ၅ နှစ် အတွေ့အကြုံနဲ့ လာမယ့် အနာဂတ်ကို ပစ္စုပန်ကို တည့်တည့် ကြည့်ပြီး လာမယ့် အနာဂတ်အတွက် ဆုံးဖြတ်ကြပါလို့ ပြောချင်တယ်။
ကျနော်တို့ လှည့်လည် အင်အားပြတဲ့အချိန်မှာ ဟိုဘက်နဲ့ထိပ်တိုက်တွေ့တာတို့ ကျနော်တို့ အခက်အခဲ ကြီးကြီးမားမား မ ရှိပါဘူး။ ထိပ်တိုက်ကြီးမားတဲ့ ပြဿနာ မရှိပါဘူး။ ကျနော်ကတော့ ရှောင်ရှားခိုင်းပါတယ်။ မှာထားပါတယ်၊ ကျနော့်ဆီက ကလေးတွေကိုလည်း သေချာမှာတယ်။ သို့သော် တကယ်လို့ ကိုယ့်ကို ကိုယ်ထိ လက်ရောက် စော်ကားလာပြီဆိုရင် ကိုယ့် ကိုယ်ကို ခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ ဥပဒေဘောင်အတွင်းကနေ တုံ့ပြန်နိုင်တယ်လို့ ကိုယ်ကတော့သွားပြီးတော့ မစပါနဲ့လို့ ဒီလိုမှာထားတယ်။
ကိုယ့်ကိုတအားဖိလာပြီဆိုရင်တော့ ကိုယ်ထိလက်ရောက်ဖြစ်လာရင်တော့ ကိုယ်က တုံပြန်စရာရှိရင်တော့လည်းပဲ ရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ ဆောင်ရွက်ကြဆိုပြီးတော့ ကျနော် ဒီလိုပဲမှာကြားပါတယ်။ ကလေးတွေကို တအားကြောက်အောင်လည်း ကျနော် မ ခြောက်ဘူး။ နောက်သည်းခံ၊ သည်းခံတယ်ဆို မနိုင်လို့ ခွင့်လွှတ်တာမျိုးလည်း မဖြစ်ရဘူးဆိုတဲ့ စကားကို မကြာခဏ ပြောခြင်းအားဖြင့် ကျနော့်နယ်မြေမှာ ဒီနေ့ထိအောင် ကြီးမားတဲ့ ပြဿနာ မရှိဘူး။ ဒီလိုလေး ကျနော်ဖြေချင်ပါတယ်။
မေး ။ ။ ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရခဲ့မယ် ဆိုရင် ဒေသခံပြည်သူတွေ အတွက် ဘာလုပ်ပေးမှာလဲ။ ပြောနိုင်တဲ့ ကတိစကား တခုခုပေါ့။
ပြောနိုင်တဲ့ ကတိစကားကတော့ ဒီ ၃ ချက်ပဲ။ အရည်အချင်းရှိတဲ့ အစိုးရ ဖြစ်လာအောင် ကျနော်တတ်နိုင်တဲ့ နေရာကနေ လုပ်မယ်။ အကြံတွေ ပေးမယ်။ အရည်အချင်းရှိတဲ့သူတွေ တိုင်းပြည်မှာ လူငယ်လူရွယ်တွေ ကျနော်တို့ ၆၈ နှစ် ရှိပြီ။ ၆၈ နှစ်ရှိပြီ ဆိုတော့ ကျနော်တို့ ဒီနေ့က ကျနော်တို့က ဒါခေတ်မှီတဲ့ခေတ်ကို သွားနေပြီလေ။ မီဒီယာခေတ်တွေရော၊ အွန်လိုင်း ရော၊ အိုင်တီရော၊ ဒီလိုသွားတဲ့အခါမှာ တကယ်တန်း ပြောမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ အသက်ကြီးတဲ့ သူတွေကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ အတွေ့အကြုံနဲ့ ဖြတ်သန်းလာတာကိုပဲ အခြေခံတတ်တဲ့ သဘာဝပေါ့။
ကွန်ဆာဗေးတစ်လို့ပဲ ပြောရမှာပေါ့နော်။ ကျနော်တို့က ရှေးရိုးစွဲလို ဖြစ်နေတော့ လူငယ်တွေ တအား နေရာရလာဖို့ လို တယ်။ ကျနော်တို့ အစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာ လူငယ်လူရွယ်တွေနဲ့ တိုင်းပြည်ပေါ်မှာစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းရှိတဲ့ အရည်အချင်း ရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းနိုင်တဲ့ အစိုးရ ဖြစ်အောင် ကျနော်တတ်နိုင်သမျှ ဥပဒေပြုတဲ့ အချိန်မှာလည်း အားပေးပြီး တော့ ကျနော်ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။ အဲဒီတော့ အစိုးရကောင်းဖြစ်လာရင်တော့ တိုင်းပြည်အတွက် ကောင်းအောင် လုပ် နိုင်မယ်။ ဒီ ၃ ချက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်းပဲ။ အရည်အချင်းရှိတဲ့ အစိုးရ၊ သန့်ရှင်းတဲ့ အစိုးရ ဖြစ်အောင် ကြိုးစားပေး မယ်။
မေး ။ ။ အရင် အစိုးရ လက်ထက်မှာ အန်ကယ် ကိုယ်တိုင်လည်း လယ်/ဆည် ဝန်ကြီး လုပ်ခဲ့တာဆိုတော့ အခု လက်ရှိ အစိုးရ ကာလမှာ လယ်သမားတွေရဲ့ အခြေအနေကို ဘယ်လိုသုံးသပ်ချင်လဲ။
ကျနော် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး လယ်/ဆည် ဝန်ကြီး လုပ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ ကျနော်တို့ရဲ့ နောင်တော်ကြီးတွေ ကျနော်တို့ရဲ့ အကြီးအကဲတွေ ကနေပြီးတော့မှ ကျနော်တို့နိုင်ငံ လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ အခွင့်အလမ်းတွေ အခြေခံတွေ တအား ကောင်းတယ်။ ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မိုလို့ ကျနော်တို့နိုင်ငံဟာ ဆန်ရေ စပါးဖူလုံအောင် နောင်တချိန်မှာ လူဦး ရေ သန်း ၁၀၀ လောက်အထိ ကျွေးနိုင်တဲ့အပြင်ကို နိုင်ငံခြားကို Export Leading Country ဖြစ်အောင် ဦးဆောင်တဲ့ နိုင်ငံ တနိုင်ငံဖြစ်အောင် အိမ်မက်တွေပေါ့နော်။ သူတို့ချမှတ်ပေးခဲ့တာ ဆည်တွေ မြောင်းတွေ အများကြီး လုပ်ထားပေးခဲ့တယ်။
လယ်ယာမြေတွေလည်း အများကြီးရှိတယ်။ သန်းပေါင်းများစွာရှိတဲ့အခါကျတော့ ဒီလယ်ယာမြေတွေ ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက် အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ ကျနော့်အနေနဲ့ ပထမအဆင့်ကတော့ ပြည်သူတွေ တခဲနက်ပါလာဖို့ လယ်ယာမြေ ဥပဒေတွေ တောင်သူ လယ်သမားအကျိုးစီးပွားဥပဒေတွေ ကျနော်တို့ ပြဌာန်းပေးခဲ့တယ်။ ပြဌာန်းပေးခဲ့ပြီးတော့ လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ခိုင်ခိုင်မာမာ ဖြစ်အောင် ကျနော်တို့ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။
တောင်သူလယ်သမား အကျိုးစီးပွားမြှင့်တင်ဖို့ ဥပဒေပြဌာန်းပေးတယ် ဒါတွေနဲ့အသက်ဝင်အောင် ကျနော်တို့ လုပ်ပေး ခဲ့ပြီးတော့ အစလည်း ပျိုးနိုင်ခဲ့တယ်။ စက်မှုလယ်ယာစနစ်ကို ကူးပြောင်းပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ အထွက်နှုန်းအောင် လုပ်နိုင်ခဲ့ တယ်။ တန်းဖိုးမြင့်ထုတ်ကုန်တွေကို ပိုင်းလော့ ပရောဂျက်နဲ့ပေါ့။ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေကို ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့မှ ဆောင်ရွက် ပြီးတော့ Export ကျနော်တို့ စပြီးတော့မှလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။
ကျနော် လယ်/ဆည် ဝန်ကြီးတာဝန်ယူတဲ့ကာလမှာ ကျတော်တို့ဟာ ကမ္ကာမှာ 1 to 10 ထဲဝင်လာပြီးတော့ နံပါတ် ၄ လောက်အထိအောင် ကျနော်တို့က Export နိုင်ငံထိ ပြန်လည်ဦးမော့လာအောင် ကျနော်တို့လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့ ထူးခြားတဲ့ မှတ်တိုင်ပေါ့။ ပဲ ဆိုလို့ရှိရင်လည်း ကမ္ကာမှာ နံပါတ် ၃ နေရာထိလောက်ကို Export နိုင်ငံပြန် ဖြစ်အောင်လုပ် နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါကျနော်တို့ရဲ့ မှတ်ကျောက်ပဲ။ လက်တွေ့ကျတဲ့ မှတ်ကျောက်။
ဒီနေ့အစိုးရမှာလည်းပဲ သူတို့တတ်နိုင်သမျှ ကြိုးစားတယ်လို့ ကျနော်လေးလေးနက်နက် ယုံကြည်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ရကိုင်ရတဲ့နေရာမှာ ခေတ်စနစ် အပြောင်းအလဲနဲ့ဆိုတော့ သူတို့ အကန့်အသတ်တွေနဲ့ သူတို့လုပ်ရတဲ့အပေါ်မှာ ပြည် သူတွေအတွက် ဘယ်လောက်အကျိုးပြုနိုင်တယ်။ မပြုနိုင်ဘူးဆိုတာ ကျနော်တော့ ထင်ပါတယ်။ အတွေ့အကြုံနဲ့ လုပ်ရ ကိုင်ရတဲ့ အကန့်အသတ်တွေကြောင့်မိုလို့ ထိရောက်တဲ့မှတ်တမ်းတွေတော့ ကျနော်မတွေ့ရဘူးလို့ ရိုးရိုးလေး ဖြေချင်ပါ တယ်။ သိပ်လည်း မဝေဖန်ချင်ပါဘူး။ ဝေဖန်တယ်ဆိုတာ အင်မတန်လွယ်ပါတယ်။ လက်တွေ့လုပ်ရတာ ဘယ်လောက် ခက်တယ်ဆိုတာ သူတို့လည်း ကိုယ်ချင်းစာလောက်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်ဗျာ။
မေး ။ ။ ပြီးခဲ့တဲ့ လအနည်းငယ်က လက်ရှိအစိုးရရဲ့ အားနည်းချက်တွေပေါ့နော်၊ အဂတိလိုက်စားမှုတွေ ရှိတယ်။ တာဝန် ပျက်ကွက်တာတွေ ရှိတယ်။ ဒုက္ခတွေ ရောက်နေလို့ ဒါတွေကို တားဆီးဖို့ လိုတယ်ဆိုပြီး စာတွေကို အန်ကယ် ကိုယ်တိုင် လိုက်ဝေခဲ့တယ်လို့ သိရတယ်။ ဘာလို အဲဒီလို လုပ်တာလဲ။
ဖြေ ။ ။ ကျနော်က ဒီအလုပ်ကို ပြန်လည် တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ အခွင့်အလမ်း ကြုံလာတဲ့အခါမှာ ကျနော့်ကို ပြည် ထောင်စု နယ်မြေ ၈ မြို့နယ်၊ ဝါရင့် အကြံပေး ဆိုပြီးတော့မှ ပါတီက တာဝန်ပေးပါတယ်။ နောက်ပြီး ဗဟိုကော်မတီဝင် ပေါ့နော်။
ဗဟိုကော်မတီဝင်နဲ့ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ၈ မြို့နယ် အကြံပေးဆိုတော့ ကျနော်က လက်တွေ့ကျကျ ကျနော့်ပါတီဝင်တွေ ပြည်သူအကြားမှာ စိမ့်ဝင်တဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုစည်းရုံးရမလဲဆိုတာ ကျနော့်ရဲ့ လက်ချာပါ။ ကျနော့်ရဲ့ မိန့်ခွန်းပေါ့။ ကျနော့်ရဲ့ ကေဒါအားလုံးကို သင်တန်းပေးပါတယ်။ ပေးတဲ့အခါ ၈ မြို့နယ်က စည်းရုံးရေးမှူးတွေ EC တွေအားလုံးကိုလည်း သင်တန်း ပေးပါတယ်။ ကျနော့်ရဲ့ မြို့နယ်ကိုလည်း အကြိမ်ကြိမ် အဖန်ဖန် သင်တန်းပေးပါတယ်။
ကျနော်က မိန့်ခွန်းတခုပြုစုပြီး ကျနော့်ရဲ့ မိန့်ခွန်းမှာတော့ဖြင့် ပြည်သူအကြားမှာ စိမ့်ဝင် စည်းရုံးရမယ့် နည်းဗျူဟာ မဟာ ဗျူဟာနဲ့၊ လက်တွေ့ပေါ့။ ဒီနေ့ ပစ္စုပ္ပန်ကို ရှု့ ပြီးတော့မှ၊ ၅ နှစ်တုန်းက တို့တွေ ဘာတွေ လုပ်ခဲ့နိုင်တယ်။ ဒီနေ့ လက်ရှိ အစိုး ရ အနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကာလတုန်းက ဘာတွေ ကတိပေးခဲ့သလဲ။ အဲဒီကတိတွေထဲက ကတိတည်တာတွေတော့ မင်းတို့ ချန်ထားလိုက်၊ ကတိ မတည်တာတွေကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မင်းတို့ မြင်တာတွေကို ရှာဖွေ၊ ဖော်ထုတ်၊ တင်ပြ၊ ပြည်သူ ကြားမှာ စိမ့်ဝင်သွားအောင် လုပ်၊ ပြည်သူတွေအတွက် စားရေး၊ ဝတ်ရေး၊ နေရေး၊ အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေ အပါအဝင်ပေါ့။
အခွန်အခတွေ ကြီးနေတာတွေအပါအဝင် လျှပ်စစ်မီတာခတွေ တက်နေတောတွေ၊ တယ်လီဖုန်းခတွေ တက်နေတာတွေ အပါအဝင် ဒါတွေက ပြည်သူကို ထိခိုက်တယ်။ ဒါတွေကို မင်းတို့ လက်လှမ်းမီအောင် လေ့လာပြီးမှ ထဲထဲဝင်ဝင် ပြော။ တဘက်ကလည်း တို့အစိုးရကို NLD ပါတီ အပါအဝင် အတိုက်အခံအနေနဲ့ ကျနော်တို့ကို ပြောတဲ့အခါ သူခိုးတွေ၊ သူခိုးပါတီလို့ စွပ်စွဲတယ်။ ဒီနေ့ ၅ နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ ဝန်ကြီးချုပ် တချို့ ဘာဖြစ်သလဲ။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတချို့ ဘာဖြစ်သလဲ။ ဖုံးဖုံးဖိဖိနဲ့ လုပ်တာတောင် ကြီးမားတဲ့ ပြဿနာတွေ မီဒီယာမှာရော အွန်လိုင်းမှာရော။ ဒါတိုင်းပြည်မှာ တအား သိက္ခာကျတယ်။
Clean Government ဖြစ်မယ်။ Corruption Zero ဖြစ်ရမယ်လို့ ကြွေးကြော်တဲ့ အစိုးရလက်ထက်မှာ ဒီလိုဖြစ်နေတာ ဒါ တို့ရဲ့ ထောက်ကွက်ပဲ၊ ရိုးရိုးလေးပါ။ အဲဒါတွေကို မင်းတို့ဖော်ပြပြီး တကယ့်ဖြစ်နေတာတွေကို ခြေခြေမြစ်မြစ် သိအောင် လုပ်ပြီး ဒါတွေနဲ့ မင်းတို့ ဆွေးနွေးမယ်။ စည်းရုံးမယ်ဆိုရင် ပြည်သူက နားလည်ပြီးတော့မှ တဘက်က တို့အားနည်းချက် တွေကို တအားထုပြီး အမုန်းတရားတွေနဲ့ ထိုးနှက်ခဲ့တာတွေကို တဘက်ကလည်း ခြေဖျက်ပြီးသား ဖြစ်သွားမယ်။
တဘက်ကလည်း တို့ဝေဖန်သံတွေက ပြည်သူအကြားမှာ ပျံ့နှံ့သွားရင် ငါတို့အတွက် စည်းရုံးရေး အထောက်အကူ ဖြစ်မယ်။ လက်ရှိ အစိုးရအနေနဲ့လည်း ဒါတွေသိလို့ ဆင်ခြင်သွားရင် ပြည်သူအတွက် ကောင်းတာပေါ့။ နောင်တက်လာမယ့် အစိုးရ တွေလည်း ကတိပေးရင်တော့ ကတိတည်တဲ့ အစိုးရ ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကို သူတို့လည်း သင်ခန်းစာရတာပေါ့။
ဒါကြောင့်မို့ ဒါကို ကျနော်က ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆွေးနွေးတယ်။ ဆွေးနွေးပြီး ကျနော့်ပါတီဝင်တွေကို ဒီနည်းလမ်းတွေကို Printed ပေါ့ဗျာ။ သူတို့ကိုပေးတယ်။ တချို့လည်း ကျနော့်ဆီမှာ ပူးကပ်ပြီး ဒီဟာ လက်ထဲရောက်သွားတော့ အစိုးရကို ဝေဖန်တယ်။ ဒါ ဝေဖန်တာ။ အပြုသဘောပါ၊ ကြည့်တတ်ရင် အပြုသဘောပါ။ တိုင်းပြည်ကောင်းဖို့ အတွက်ပါ။ ဘယ် အစိုးရပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပြည်သူကို ကတိအမျိုးမျိုးပေးပြီး ကတိမတည်တာတော့ မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာ။
ဒါကို ကျနော်က ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ၈ မြို့နယ် ဝါရင့် အကြံပေး ဆိုတော့ အကြံပြုတာပေါ့၊ ကျနော်ရဲ့ ၈ မြို့နယ်လုံးမှာ ရှိ တဲ့ ပါတီကေဒါတွေကို အကြံပြုတဲ့အပေါ်မှာ မီဒီယာတချို့က လိုက်ဖော်ပြတာ။ ဒါပေမယ့် ကျနော် ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ။ ဘာခေါ်မလဲ။ ကြော်ငြာပြီးသား၊ ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာ။ ပြည်သူတွေအတွက် ပိုသိသွားတာပေါ့။ ကတိတည်တဲ့ အစိုးရမျိုးကို ပြည်သူတွေ တောင့်တနေပြီ ဆိုတာကို ဦးမြင့်လှိုင်ကလည်း ပြည်သူထဲက ပြည်သူတယောက် အနေနဲ့ တောင့်တနေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော့်ရဲ့ ဆန္ဒကို ဖော်ထုတ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
မေး ။ ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ကာလတချို့မှာလည်း ဆန်ပေးမယ်။ ဆီပေးမယ်။ လာဘ်ပေး စည်းရုံးတယ် ဆိုပြီး တိုင်ကြားခံရတာရှိတယ်ဆိုပြီး သိရပါတယ်။ မမှန်သတင်းတွေနဲ့ ဟောပြောစည်းရုံးတယ်ဆိုပြီး တိုင်ကြားခံရတာ ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ၂၀၂၀ မှာရော အဲဒီလို မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ ဒါက ကျနော့်ရဲ့ မေတ္တာစေတနာပဲဗျ။ ကျနော့်မိဘတွေက သွန်သင်တယ်။ ကိုယ်က ပေးဆပ်ရမယ်။ အားနည်းတဲ့ သူ ကူညီရမယ်။ စားဝတ်နေရေး ကျပ်တည်းတဲ့သူတွေကို ကူညီရမယ်။ လိုတာကို ဖြည့်ဆည်းပေးရမယ်ဆိုပြီး ဒါကျနော့်ရဲ့ မွေးရာပါ ဗီဇပဲဗျ။ ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော်နဲ့ တွေ့ ကြုံသူ၊ ကျနော့်ဆီလာရင် ကျနော်က ပေးကမ်းဖို့ပဲ။ ကျနော့် ထက်ကြီးတဲ့သူတွေကိုလည်း ကန်တော့ဖို့ပဲ။ ကျနော်က မေတ္တာလည်း ပို့တယ်။ နေ့တိုင်း မနက်ညပေါ့ဗျာ။ သီလတွေ ခံယူတယ်။ ပုတီးစိပ်ပြီးရင် မေတ္တာပို့တယ်။ ပြည်သူတွေလည်း မေတ္တာပို့တယ်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်၊ တိုက်ပွဲကျသွားတဲ့ ရဲဘော်ရဲဘက်တွေ၊ သင်ဆရာ မြင်ဆရာ ကြားဆရာ တွေကိုလည်း မေတ္တာပို့တယ်။
နှုတ်တဲ့ မေတ္တာပို့သလို ကြုံတဲ့နေရာမှာ ပြည်သူတွေကို ရက်ရက်ရောရော စေတနာရှိပါတယ်။ ကျနော့်ရဲ့ စေတနာ၊ သဒ္ဒါ တရားကို မည်သည့် ရွေးကောက်ပွဲက လာတားဆီးလည်း ကျနော် မမှုပါဘူးဗျ။ ကျနော်က လောဘနဲ့ တဏှာနဲ့ လုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ လူထုရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းတာပေါ့ဗျာ။ ဝတ်စုံလေးတွေ တောင်းတောင်း ဘာတောင်းတောင်း၊ ကျနော့်မှာ အလျှံပယ်ပဲ။ ပေးကမ်းစွန့်ကြဲရတဲ့ စိတ်စေတနာပေါ့ဗျာ။
ကျနော်က ထူးထူးခြားခြား နိုင်ငံအတွက်ဆိုရင် နိုင်ငံမှာ အင်မတန်မှာ စွမ်းအင်ကဏ္ဍ အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ ကာလတုန်းက ဧရာမ ကျောက်မီးသွေးတွင်းကြီးတွေကို ကျနော် လေ့လာသင်ကြားခဲ့တဲ့ ဘူမိဗေဒ ဘာသာရပ်ကို အခြေခံပြီး ကျနော် ရှာခဲ့ တာ။ ရှမ်းမြောက်တခွင်မှာ ကျောက်မီးသွေးတွင်းတွေ အခြေခံပြီး ဘိလပ်မြေ စက်ရုံတွေ သကြားစက်ရုံကြီးတွေ လည်ပတ် နေတာ၊ အင်မတန် အားရစရာကောင်းပါတယ်။ ရှမ်းမြောက်တခွင်တင်မဟုတ်ဘူး။ မန္တလေးတိုင်း တတိုင်းလုံး နီးပါးပါပဲဗျာ။
စွမ်းအင်ကဏ္ဍမှာ နောက်မိုင်းရှုးရတနာမြေကို ကျနော် ကိုယ်တိုင်ရှာခဲ့တာ။ ကျနော် ဗိုလ်မှူးလေးဘဝနဲ့ စစ်ဆင်ရေး တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့တာ။ သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနက ကျနော့်ကို ဂုဏ်ပြုပြီး ဆုငွေတွေချီးမြှင့်တယ်။ ကျနော့်ရဲဘော်တွေကို ကျ နော် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ပြန်ပေးလိုက်တယ်။ နောက်ပြီး ကျနော် ထူးခြားတယ်။ ကျနော်က ထီအစောင် ၁၁၀ အထိ အတွဲ လိုက်ပေါက်ဖူးတယ်။ ကျနော့်ရဲ့ အတိတ်ကံတွေ ရှိတယ်။ အတိတ်ကံတွေသည် သေလွန်ရင် ဘာမှ ကျန်ခဲ့မှာ မဟုတ်ဘူး။
လက်ရှိ အတိတ်ကံ ကောင်းမှုတွေ ရှိခဲ့တယ်။ ပစ္စုပ္ပန်လည်း ကောင်းမှုလုပ်မယ်ဆိုပြီး ကျနော်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာ တ ဖက်က လာဘ်လာဘ ပေးတယ်ဆိုပြီး ဆန်တအိတ် ဆီတပိဿာနဲ့ ဘယ်လိုလာဘ်လာဘ ပေးတယ် ခေါ်မလဲဗျာ၊ ပုဒ်မ တပ်တာတော့၊ ဖြစ်သင့်တာက ကျနော်က တပိဿာပေးရင် သူက နှစ်ပိဿာပေးပါလား။ ကျနော်က ၁၀ ကျပ်ပေးရင် ၁၅ ကျပ်ပေးပါလားဗျာ။
အဲလိုမပေးဘဲ ဒါကို ပုဒ်မတပ်ပြီး ပြည်သူတွေ ဝေမျှရတဲ့ဟာကို ဝတ်စုံတစုံပေးရင် သူတစုံပေးရင် နှစ်စုံ မရဘူးလားဗျာ။
အဲဒီလိုမလုပ်ဘဲ ပိတ်ပင်တားဆီးတယ်ဆိုတော့ အတိတ်ကံတော့ မသိဘူး။ ပစ္စုပန်မှာတော့ ဒီလူတွေ မလုပ်သင့်တာ လုပ် နေတယ်လို့ ကျနော့်ကို စွပ်စွဲတယ်လို့ ကျနော်မြင်တယ်။ ဒါက မလုပ်သင့်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်။
ဒါကြောင့်မိုလို့ ကျနော်များ ဒီတကြိမ်မှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာခဲ့ရင် သိန်း ၁၀၀ နဲ့ စည်းရုံးခွင့်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ ဂဏန်းကို ဒါမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ ပြည်သူတွေကို စေတနာ သဒ္ဒါတရား ရှိတဲ့သူက များများပေးရင် လှူရင် မကောင်းဘူးလားဗျာ။ ပိုက်ဆံနဲ့ မဲဝယ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြည်သူက ဦးနှောက်ရှိပါတယ်။ သူဘယ်သူ့ကို ပေးရမလဲ ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကို စွပ်စွဲတာကတော့ စွပ်စွဲတဲ့သူက ဒီစကားလုံးလေးကတော့ ကျနော် မပြောသင့်ပါဘူး။ အမြင်က သေးသိမ်လွန်း အား ကြီးတယ်။ ဓားပြတိုက်တာလည်း မဟုတ်ဘူး။ ပြည်သူကို ထောက်ပံ့ကူညီတယ်ဆိုတာ မဖြစ်သင့်ဘူးလားဗျာ။ ကျနော် တလျှောက်လုံး ထောက်ပံ့တယ်။ ပညာရည်ချွန်ဆုပေးပွဲလည်း ထောက်ပံ့တယ်။ လွတ်လပ်ရေးနေ့ အားကစားပွဲ ကျနော်ထောက်ပံ့တယ်။ ကထိန်လည်း ကျနော်ခင်းတယ်။ စုပေါင်းရဟန်းခံ ရှင်ပြု ၊ ရှင်မပြုနိုင်တဲ့ကလေးတွေ အားလုံး ရှင်ပြုပေးတယ်။ ဆရာတော် သံဃာတော်ကြီးတွေ သက်ကြီးဝါကြီးတွေ ဝါထပ်ချင်တယ် ကံထပ်ချင်တယ်။ ကျနော် အားလုံးလုပ်ပေးတယ်။
အဲဒါကို ဘောင်ခတ်ထားတယ်။ ဘာသာရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးကို စည်းရုံးတယ်လို့။ ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဗျ ကျနော်က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ကောင်း တယောက်အနေနဲ့ ရှိတဲ့ အရင်းအမြစ်တွေနဲ့ ကျနော် ကုသိုလ်လုပ်တာပါဗျာ။ ကျနော့်ကို စွပ်စွဲတာ သေးသိမ်တယ် လို့ တင်ပြချင်ပါတယ်။ ဒါ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ကိုယ်တတ်နိုင်ရင် ပေးကမ်းလှူဒါန်းပေါ့ဗျာ။
သူများတယောက်ရဲ့ စေတနာ သဒ္ဒါတရားကို ပိတ်ပင်တယ်ဆိုတာ မလုပ်သင့်ပါဘူးဗျာ။ ကျနော့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် ရဲဘော်ရဲဘက်တွေက အဘက ဝေသန္တရာပဲတဲ့။ ဝေသန္တရာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဒါ မြန်မာတို့ရဲ့ လူမှုရေးကျင့်ဝတ်ကို တို့ လုပ်နေတာတွေကို နှောင့်ယှက်ပြီး ပြောတာတွေကို မင်းတို့ မေ့လိုက်ပါလို့ ဒီလိုပဲ ဖြေပါတယ်ဗျာ။
နေပြည်တော်တွင် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကို ထောက်ခံကြသူများ (ဓာတ်ပုံ – သီဟလွင်/ဧရာဝတီ)
မေး ။ ။ တပ်မတော်က အငြိမ်းစား ဗိုလ်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေပေါ့နော်။ အများစုက ပါတီဥက္ကဌကြီး ကိုယ်တိုင် နေပြည် တော် ကနေပြိုင်ကြတယ်။ အန်ကယ်ကိုယ်တိုင်လည်း နေပြည်တော်ကို ဘာကြောင့် ရွေးချယ်ဖြစ်တာလဲ။
တကယ့် အစစ်အမှန်ကို ပြောရမယ်ဆိုရင် ကျနော်က အငယ်ဆုံး ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ၊ အငယ်ဆုံး တိုင်းမှူး တာဝန် ထမ်း ဆောင်ခဲ့ရတော့ ကျနော်တို့ကို ပါတီနိုင်ငံရေးလုပ်ဖို့ အပေါ်က လူကြီးတွေ တာဝန်ပေးတဲ့အခါမှာ ကျနော် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ငြင်းတယ်ဗျာ။ ကျနော် တပ်မတော်မှာလည်း အမည်းစက် မရှိဘူး။ ကျနော်မှာလည်း ပြည့်စုံ လုံလောက်စွာ နေနိုင်တယ် ဆိုတာ လူကြီးတွေကလည်း ကျနော်အစောက တင်ပြသလို ထူးထူးခြားခြား ထီအစောင် ၁၁၀ ပေါက်ဖူးတဲ့ ဗိုလ်ချုပ် တယောက်ပေါ့ဗျာ။ ဒါက တကြိမ်တည်းကို ပြောပြတာ။ အကြိမ်ကြိမ် ပေါက်ပါတယ်။
ရတနာမြေတွေလည်း ကိုယ်တိုင် ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံ၊ အရင်းအမြစ်တွေလည်းရှိတဲ့ ကျနော့်ရဲ့ အခြေခံ မှာ၊ ကျနော်ရဲ့ အသက်အရွယ်မှာ ကျနော်က နယ်ဘက်တာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်ဖို့ လုံးဝ ခေါင်းထဲမှာ အိပ်မက် မရှိတဲ့ အခါကျတော့ နိုင်ငံရေးသမားလည်း မလုပ်တတ်ဘူး။ ကျနော် ငြင်းပါတယ်။ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ငြင်းပါတယ်ဗျာ။
လူကြီးတွေက တာဝန်တရပ်အနေနဲ့ လုပ်ပါ။ မင်း ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာ တာဝန်ယူတုံးက လယ်ယာကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် ရေးကို တော်တော် လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ စားဝတ်နေရေး ပြေလည်ဖို့အတွက် နောက်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလည်း မင်းတော်တော် လုပ် နိုင်ခဲ့တယ်။ ရှမ်းပြည် တခွင်လုံးလည်း ငြိမ်းချမ်းသွားတယ်ဗျာ။ ကျနော်တိုင်းမှူး တာဝန်ယူခဲ့စဉ် အခါမှာလေ။ ကျနော်ရဲ့ ရဲဘော် ရဲဘက်တွေရဲ့ စွမ်းစွမ်းတမံ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုပေါ့။
ကျနော်နဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊ ကျနော့်ရဲ့ အကြီးအကဲတွေရဲ့ လမ်းညွှန်မှုနဲ့ ပေးတဲ့တာဝန်ကို အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ လုပ် နိုင်ခဲ့တော့ ဒီနိုင်ငံရေးတာဝန်ကိုလဲ ယူရမယ်ဆိုပြီး Must Do အနေနဲ့ အမိန့်တရပ်အနေနဲ့ပေးတော့ ကျနော်က အထက်မှ ပေးအပ်သော အမိန့်နဲ့ တာဝန်ကို အောင်မြင်ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်ပါမယ်ဆိုတဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ တပ်မတော်သား ကျင့်ဝတ်ကို လိုက်နာပြီး ရွေးတဲ့အခါ ကျနော့်ကို လူကြီးတွေက တောင်းဆိုခိုင်းတဲ့အခါ ကျနော်က မိုးကုတ်ဇာတိဖြစ်တယ်။ မိုးကုတ်မှာ ရွေးမယ်ဆိုပြီး နံပါတ် ၁ တောင်းဆိုတယ်။ နံပါတ် ၂ တိုင်းမှူး လုပ်ခဲ့တဲ့ လားရှိုးမှာ ရွေးမယ်။ နံပါတ် ၃ ကျနော် နောင်ချိုမှာ ရွေးမယ်။ နောင်ချိုမှာ ကျောက်မီးသွေးတွင်းတွေနဲ့ သကြားစက်တွေနဲ့ လယ်ယာကဏ္ဍ မျိုးစေ့တွေထုတ်တာ၊ ပြောင်းမျိုးစေ့ထုတ်တာတွေ လုပ်ခဲ့တော့ တောင်သူလယ်သမားတွေနဲ့ ကျနော်နဲု့ တသားထဲပဲ။
ဒါကြောင့်မို့ နောင်ချိုမှာ ရွေးမယ်ဆိုတော့ လူကြီးတွေက မင်းမရွေးရဘူး။ နေပြည်တော်က အရေးကြီးတယ်။ နေပြည် တော်ရဲ့ ခံစစ်၊ ခံကတုတ်နေရာမှာ ဒက္ခိဏမှာ ရွေးဆိုတော့ ခံကတုတ်ကြီးကို တာဝန်ပေးတာ သေတဲ့အထိ လုပ်ရမယ်လို့ ထင်ပါတယ်ဗျာ။ ကျနော် ဝန်ကြီးရာထူးတွေ ဘာတွေ မမက်ပါဘူး။ ဒီခံကတုတ်တာဝန်ပေးထားတော့ ဌာနချုပ်လည်း ရှိတဲ့ နေရာဆိုတော့ ကျနော်က ဒီတာဝန်ပေးချက်အပေါ်မှာ ဒီနေ့အထိ သစ္စာရှိရှိနဲ့ပေါ့။
ကျနော် မရွေးတော့ဘူး။ ၂၀၁၅ မှာ ဆိုတော့ ကျနော့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် လူကြီးတွေက စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့။ မင်းဘာလို့ မရွေးတာလဲ၊ သူတို့တော်တော် စိတ်မကောင်းပါဘူး။ လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ တိုင်းပြည်အတွက် ငါတို့ အသက် တအား ကြီးသွား ပြီ။ မင်းတို့ လုပ်နိုင်သမျှ လုပ်ပါဆိုတဲ့ အပေါ်မှာလည်း ကျနော့်ရဲ့ တပ်မတော်အပေါ် ထားရှိတဲ့၊ အကြီးအကဲတွေအပေါ်မှာ တန်ဖိုးထားတဲ့ လေးစားမှု၊ သစ္စာရှိမှုကို နံပါတ် ၁ ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
နံပါတ် ၂ ကတော့ ၂၀၁၀ မှာ ကျနော် ဒီဘက်ကို ရွေးခဲ့တဲ့အတွက် ကျနော်ဒီနယ်မြေသူ နယ်မြေသားတွေ အခြေအနေကို တော်တော်သိပါတယ်ဗျာ။ ဒက္ခိဏမှာ ဆက်လက်ပြီး နိုင်သည်ဖြစ်စေ ရှုံးသည်ဖြစ်စေ ပြည်သူက ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။ ပြည် သူက ရွေးချယ်တာမှန်ရင် ကျနော် ဆက်လုပ်မှာပေါ့။ သူတို့ ကြိုက်တဲ့သူရွေးတော့ သူတို့နဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ အစိုးရတခု ဖြစ်လာဖို့ပဲ မျှော်လင့်ရတာပေါ့။
ထိုနည်းတူစွာ ကျနော်တို့ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် ဗိုလ်ချုပ်တွေ ဒီဘက်မှာ ရွေးခဲ့တယ်ဆိုတာ နေပြည်တော်ဟာ ပြည်ထောင် စု နယ်မြေဗျာ၊ ဌာနချုပ် ရှိတဲ့နေရာ၊ ဌာနချုပ်နဲ့ လက်လှမ်းမီတဲ့ မြို့နယ်တွေကို အတွေ့အကြုံရှိတဲ့။ ကျနော်ပြောချင်တာ ကျနော်တို့က တိုက်ပွဲမှာ ဒဏ်ရာတွေ ငှက်ဖျားတွေဖြစ် ဆံပင်တွေကျွတ် ခေါင်းတွေဖြူနဲ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်လာခဲ့တာ။ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဟာ မိုးပေါ်က ကျလာတာ မဟုတ်ပါဘူးဗျ ၊ ဒုဗိုလ်ကနေ တဆင့်ပြီးတဆင့် ဖြစ်လာတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ ဒီနေပြည်တော်ဆိုတာ ကျနော်တို့ရဲ့ ခံတပ်ပေါ့ဗျာ။
နေပြည်တော်ကြီး ဘာကြောင့်မို့ဖြစ်လာသလဲ ပြန်ကြည့်လိုက်၊ ကျနော်တို့ရဲ့ မင်းနေပြည်တော် ၊ ရန်ကုန်ဆိုတာ အစွန် အဖျားမှာ ရှိနေတယ်။ ပင်လယ်ရေကြောင်းနဲ့ ရေတပ်အင်အား မတောင့်တင်းတဲ့ နိုင်ငံအနေနဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ ဗဟိုချက်မ နေရာကို နေပြည်တော်လို့ ရွေ့ပြောင်းထားတာ။ ရွေ့ပြောင်း တည်ဆောက်ထားတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကြောင့် ဒီနေ့ အစိုးရရော ပြည်သူတွေရော လုံလုံခြုံခြုံနဲ့ နေပြည်တော်ကို ဗဟိုပြုပြီးတော့ တိုင်းပြည်ရဲ့ ယန္တရားကို လည်ပတ်နေနိုင်တာ။
အဲဒီလို ဗဟိုချက်မနေရာမှာ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူတွေ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်တယ်ဆိုတာ တိုင်းပြည်အတွက်ပါပဲလို့ ပြောချင်ပါ တယ်။ ကျနော်တို့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအတွက် မဟုတ်ပါဘူး။ နေပြည်တော်မှာ ရွေးလို့ ဘာတွေရမလဲဗျာ။ အကုန်လုံးက ခေါင်းခဲဖို့ပဲ ရှိပါတယ်ဗျာ။ ပြည်သူတွေအတွက် ဖြည့်ဆည်းဖို့ပါပဲ။ စေတနာသက်သက်ပါပဲ။
ကျနော် မိုးကုတ်မှာ သွားရွေးရင် ကျနော့်ရဲ့ ဆွေမျိုး မိတ်သင်္ဂဟ အင်အား မောင်နှမတွေ အများကြီးရှိတယ်။ အမေ့ကိုလည်း ခွင့်ပန်ပြီးတော့ အရင်နေရာပဲ ရွေးပါမယ်။ ရပ်မိရပ်ဖ ကိုယ့်ရဲ့ ဆွေမျိုးတွေကိုလည်း ဒီနေရာမှာပဲ လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့၊ တ နည်းအားဖြင့် ပြောရင်တော့ ရေစက်ပေါ့ဗျာ၊ ကျနော်တို့တွေ အလုပ်အကျွေးရှိနေတယ်လို့ ပြောချင်တာပေါ့။ အကြွေးများရှိခဲ့ သလား မသိဘူး။ အကြွေးရှိလို့ အကြွေးဆပ်နေတယ်လို့ပဲ ဖြေလိုပါတယ်။ ကျနော်တို့က မေတ္တာနဲ့ပါ။ ဘာမှ အမြတ်ထုတ်ဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ နေပြည်တော်မှာ အရွေးခံတာ ပေးဆပ်တာပါဗျာ။
Topics: ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ, နေပြည်တော်, ဦးမြင့်လှိုင်